I-Westland Hideaway ngaseNorthsea
I-Westland Hideaway itholakala endlini yasepulazini engu-1880 ephendulwe ikhaya lamaholide. Indlu ibhekene nempahla yethu, kodwa uzoba nengadi yakho kanye nethala kanye nobumfihlo obuningi. Uhambo olufushane ukusuka kwelinye lamabhishi ahamba phambili ezindaweni kanye nemizila eminingi epholile yokuhamba izintaba. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna iholide eliphumulele noma imisebenzi eminingi emvelweni uzoyithola e-Fjaltring nasezindaweni ezizungezile.
I-Westland Hideaway inamagumbi okulala amabili aphezulu, igumbi lokugezela eliphezulu nendawo enkulu ephezulu ene-hammock nemibhede yasemini yokufunda, ukulala nokuzipholela. Phansi kunekhishi, indawo yokudlela, igumbi lokuphumula, ithala kanye nendlu yangasese eyengeziwe.
Indawo ithule njengoba isemazweni futhi iwuhambo lwemizuzu eyi-10 ukuya olwandle kanye nasesitolo esincane segrosa esinokukhethwa kukashizi okuhle, iwayini nakho konke okunye ongase ukudinge eholidini lakho. Uhambo olufushane nje unqamula insimu ungakwazi ukuzimbela amazambane akho bese uthengela amaqanda amasha.
Thina, ababungazi bakho sihlala kwamakhelwane futhi cishe uzosibona nsuku zonke uma sisekhaya. Zizwe ukhululekile ukusicela iseluleko sokuthi ungaya kuphi nokuthi ungakubona ini endaweni esikujabulela kakhulu ukusiza. Ukuthi ufuna ukusebenzelana nathi kangakanani kuncike kinina ngokuphelele - mhlawumbe nifuna nje ukuphumula futhi nithule, esikuqonda ngokuphelele nesikuhloniphayo. Futhi mhlawumbe ufuna ukuxoxa futhi uphuze ikhofi, siyajabula ukwenza lokho nathi.
Thina, ababungazi bakho sihlala kwamakhelwane futhi cishe uzosibona nsuku zonke uma sisekhaya. Zizwe ukhululekile ukusicela iseluleko sokuthi ungaya kuphi nokuthi ungakubona ini en…